Ịsụgharị Akwụkwọ Anyị na Idosa Ya n’Ebe Na-ekwo E Meela Ka Ọtụtụ Ndị Nụ Ozi Ọma | Otú Ihe Si Kwụrụ n’Indoneshia Ugbu A
N’oge niile ahụ a machibidoro anyị iwu, ụmụnna anyị nọ́ n’Indoneshia mere ihe Jizọs sịrị ka anyị na-eme. Ọ sịrị: “Bụrụnụ ndị dị akọ dị ka agwọ, ndị na-adịghị aghụghọ, dị ka nduru.” (Mat. 10:16) Ma mgbe e wepụchara iwu ahụ, ọ bịara dị mkpa ka a kụziere ọtụtụ otú e si ezi ozi ọma “n’atụghị egwu.”—Ọrụ Ndịozi 4:31.
Dị ka ihe atụ, ụfọdụ ụmụnna anyị anaghị aga ozi ọma ụlọ n’ụlọ. Naanị ihe ha na-eme bụ ịga nletaghachi na iduziri ndị mmadụ ọmụmụ Baịbụl. E nwekwara ndị na-anaghị ekwe ezi ndị Alakụba ozi ọma. Ọtụtụ gaa ozi ọma, ha agwa ndị mmadụ na ha bụ Ndị Kraịst kama ịgwa ha na ha bụ Ndịàmà Jehova. Ha na-ejikwa Baịbụl chọọchị Krisendọm bipụtara ezi ozi ọma kama iji Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ e dere n’asụsụ Indoneshian. * Ọ na-esikwara ndị ọzọ ike inyefe ndị mmadụ akwụkwọ anyị.
Ụfọdụ n’ime ihe ndị a ha na-eme bụ ihe ha na-eme mgbe a machibidoro ha iwu, ndị ọzọ abụrụ n’ihi na ọ bụ omenala obodo ha. N’Indoneshia, ndị mmadụ na-ekweta ime ihe na-abụghị obi ha ka udo chịa. Ha mewe ihe, ha na-eme ya otú ndị mmadụ na-agaghị ama na ọ bụ ihe ha na-eme. Olee otú a ga-esi gbazie ụmụnna anyị ndị a?
Jehova ji ụmụnna anyị ndị tozuru okè gbazie ha. (Efe. 4:11, 12) Dị ka ihe atụ, n’afọ 2010, mgbe Nwanna Stephen Lett, bụ́ onye so n’Òtù Na-achị Isi bịara n’Indoneshia, ọ gbara ụmụnna ume ka ha na-eji Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ aga ozi ọma, si otú ahụ mee ka ndị mmadụ mara aha Chineke. Otu onye ozi ala ọzọ aha ya bụ Misja Beerens kwuru, sị: “Okwu Nwanna Lett ruru ọtụtụ ụmụnna n’obi. Ọ bịara doo ha anya na ha kwesịrị ime ka ndị mmadụ mara na ha bụ Ndịàmà Jehova, jirikwa obi ike na-akụziri ndị mmadụ Okwu Chineke.”
Ebe ọ bụ na ndị Alakụba nọ́ n’Indoneshia na-echekarị na Ndịàmà Jehova na chọọchị ndị ọzọ bụ otu, Ozi Alaeze Anyị nke e bipụtaara ndị Indoneshia gbara ụmụnna ume, sị: “Ọ kacha mma ka ị gwa onye ị na-ezi ozi ọma ozugbo i bidoro na ị bụ Onyeàmà Jehova. . . . Ụjọ anaghị atụ anyị ikwu na anyị bụ Ndịàmà Jehova. Anyị chọkwara ka ndị bi n’ókèala anyị mara aha ya na ihe ndị ọ chọrọ imere anyị.” Nwanna Shinsuke Kawamoto, bụ́ onye na-eje ozi n’alaka ụlọ ọrụ anyị dị n’Indoneshia kwuru, sị: “Ịgwa ndị mmadụ hoo haa na anyị bụ Ndịàmà Jehova abaarala anyị ezigbo uru. O meela ka ọtụtụ ndị Alakụba chọọ ịma ndị anyị bụ. Ha chọrọ ịma otú anyị si dị iche na chọọchị ndị ọzọ. Nke a emeela ka anyị jiri ohere ahụ zie ha ozi ọma.”
A gbakwara ụmụnna anyị ume ka ha gbalịa na-enyekwu ndị mmadụ Ụlọ Nche na Teta! Nwanna Lothar Mihank, bụ́ onye na-ahaziri Kọmitii Alaka ọrụ, kwuru, sị: “Ka ndị mmadụ nwee ike ịmata ndị anyị bụ, ha ga-agụ Ụlọ Nche na Teta! anyị. Ha na-eme ka ndị mmadụ lewe anyị anya otú kwesịrị ekwesị, meekwa ka ha na-ege anyị ntị. Ọ bụrụ na anyị ana-ekesa ha ebe niile, ọ ga-eme ka ọtụtụ ndị mara onye Jehova bụ.”
Izi Ozi Ọma n’Ebe Na-ekwo Ekwo Enyerela Anyị Ezigbo Aka
N’afọ 2013, alaka ụlọ ọrụ anyị dị n’Indoneshia malitere ụzọ ọhụrụ abụọ Òtù Na-achị Isi kwadoro ka anyị si na-ezikwu ozi ọma. Ha bụ: Idosa akwụkwọ anyị n’ebe ndị na-ekwo ekwo alaka ụlọ ọrụ kwadoro nakwa ọgbakọ idosa akwụkwọ anyị n’ebe na-ekwo ekwo n’ókèala ha ndị okenye kwadoro. Nke a emeela ka e zie ọtụtụ ndị Indoneshia ozi ọma.
Otu n’ime ebe mbụ alaka ụlọ ọrụ Indoneshia kwadoro ka a na-edosa akwụkwọ anyị na tebụl n’ebe na-ekwo ekwo bụ n’Ebe Ọdịda Anyanwụ Jakata. Ọgbakọ dị iche iche malitekwara ịna-eme otú ahụ n’ókèala ha. N’ime otu afọ a malitere ime ya, e nweela ihe karịrị narị tebụl anọ na ihe a na-akwagharị akwagharị n’ebe dị iche iche n’Indoneshia. Olee uru nke a barala?
Otu okenye nọ́ na Jakata aha ya bụ Yusak Uniplaita kwuru, sị: “Tupu anyị amalite idosa akwụkwọ anyị n’ebe na-ekwo ekwo, anyị kwuru ka a na-ezitere anyị otu puku magazin na narị abụọ n’ọnwa. Ma, mgbe ọnwa isii gachara, anyị kwuru ka a na-ezitere anyị puku magazin isii n’ọnwa. Ugbu a, anyị gwaziri alaka ụlọ ọrụ ka ha na-ezitere anyị puku magazin asatọ n’ọnwa. Anyị na-enyefekwa ọtụtụ akwụkwọ na broshọ.” Na Medan, dị́ n’Ebe Ugwu Sumatra, ndị ọsụ ụzọ ole na ole dosara akwụkwọ anyị n’ihe a na-akwagharị akwagharị n’ebe atọ na-ekwo ekwo. N’ọnwa mbụ ha malitere, ha nyefere otu narị akwụkwọ na iri na ise nakwa magazin dị otu puku na narị asatọ. Mgbe ọnwa abụọ gachara, ihe dị ka ndị ọsụ ụzọ iri isii, bụ́ ndị dosara akwụkwọ anyị n’ebe asaa na-ekwo ekwo, nyefere ndị mmadụ akwụkwọ anyị dị otu puku na narị abụọ, nyefeekwa puku magazin iri na abụọ na narị anọ. Onye ozi ala ọzọ aha ya bụ Jesse Clark kwuru, sị: “Ụzọ ọhụrụ ndị a anyị si ekwusa ozi ọma na-atọ ụmụnna ụtọ, ha gosikwara na ọtụtụ ndị nwere mmasị ife Chineke n’Indoneshia. Izi ozi ọma n’ebe na-ekwo ekwo enweghị nkwụsị n’obodo a.”
Iji Asụsụ Na-eru Mmadụ n’Obi Ezi Ya Ozi Ọma
Indoneshia dị n’ebe ndịda ọwụwa anyanwụ Eshia, nke bụ́ otu n’ime ebe ndị a kacha nwee asụsụ dị iche iche ndị mmadụ na-asụ n’ụwa. E nwekwara asụsụ dị iche iche ndị mmadụ na-asụ n’Indoneshia. * Ọ bụ eziokwu na ọtụtụ ndị Indoneshia na-asụ Indoneshian, ma ọtụtụ ndị na-asụkwa asụsụ obodo ha, nke bụ́ asụsụ kacha eru ha n’obi.
Ndị a bụ ndị nsụgharị na-asụgharị akwụkwọ anyị n’asụsụ Batak-Toba n’Ebe Ugwu Sumatra
N’afọ 2012, alaka ụlọ ọrụ kpebiri ịmata akwụkwọ anyị ndị a ga-ewepụta n’asụsụ dị iche iche a na-asụ n’Indoneshia iji zie ndị na-asụ ha ozi ọma. Nwanna Tom Van Leemputten kwuru, sị: “Anyị malitere ịsụgharị akwụkwọ anyị n’asụsụ iri na abụọ. Ihe dị ka otu narị nde mmadụ na nde iri abụọ na-asụ ha. Mgbe ndị nsụgharị na-asụgharị akwụkwọ anyị n’asụsụ Javaniiz hụrụ traktị mbụ e wepụtara n’asụsụ Javaniiz, obi tọrọ ha ụtọ nke mere ka anya mmiri gbaa ha. Ha emechaala nweta akwụkwọ anyị n’asụsụ ha.”
Ma ọtụtụ ọgbakọ ka ji asụsụ Indoneshian na-amụ ihe ma n’ọgbakọ ndị dị n’ime obodo ebe ọtụtụ ndị na-asụ asụsụ obodo ha. Nwanna Lothar Mihank kwuru, sị: “N’afọ 2013, mụ na nwunye m Carmen gara mgbakọ abalị abụọ e nwere n’Agwaetiti Nịas, dị́ n’Ebe Ugwu Sumatra. Na narị mmadụ anọ bịaranụ, ọtụtụ n’ime ha na-asụ asụsụ Nịas. Ma ihe e ji na-ekwu okwu ná mgbakọ ahụ bụ asụsụ Indoneshian. Mgbe a jụchara ụmụnna e nyere ihe omume ná mgbakọ ahụ ma hà ga-ejili asụsụ Nịas mee ihe omume ha. Ha sịrị na ha ga-ejili ya. N’ihi ya, a gwara ndị bịara mgbakọ ahụ na ndị niile ga-ekwu okwu echi ga-ekwu ya n’asụsụ Nịas. N’echi ya, ihe karịrị narị mmadụ isii bịara ju n’ụlọ mgbakọ ahụ nke na ebe ahụ abaghịzi mmadụ.” Nwanna Nwaanyị Carmen kwuru, sị: “O doro anya na ha gere ntị nke ọma n’okwu ndị e kwuru ụbọchị ahụ karịa ka ha gere ụnyaahụ ya e ji Indoneshian kwuo okwu. Obi dị ha ụtọ na ha nụrụ okwu ndị e kwuru n’asụsụ ha, ghọtakwa ha nke ọma.”
Ebe ụmụnna anyị na-ezi onye ogbi ozi ọma
A na-ezikwa ndị ogbi e nwere n’Indoneshia ozi ọma n’asụsụ ha. Kemgbe afọ 2010, ụmụnna na-asụgharị akwụkwọ anyị n’Asụsụ Ndị Ogbi nke Indoneshia asụgharịala broshọ asaa na traktị asatọ. Alaka ụlọ ọrụ ahaziekwala klas iri abụọ na anọ e ji kụziere ụmụnna karịrị narị asaa na iri ise asụsụ ndị ogbi. Taa, e nwere ọgbakọ iri abụọ na atọ na-amụ ihe n’asụsụ ndị ogbi, nweekwa ebe dị iche iche a na-amụ ihe n’asụsụ ndị ogbi ma ha abụbeghị ọgbakọ. Ha na-enyere ihe dị ka nde ndị ogbi atọ bi n’Indoneshia aka ịmara onye Chineke bụ.
Ka ọ dị ugbu a, e nwere asụsụ iri atọ na asaa a na-asụgharị na Ngalaba Nsụgharị nke alaka ụlọ ọrụ anyị dị n’Indoneshia. E nwere ndị nsụgharị otu narị na iri na asaa nakwa mmadụ iri ise na-enyere ha aka. Ha na-arụ ọrụ n’ebe iri na itoolu a na-asụgharị akwụkwọ anyị n’Indoneshia.
^ para. 2 E wepụtara Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ zuru ezu n’asụsụ Indoneshian n’afọ 1999. Ndị sụgharịrị ya mụrụ anya ehihie na abalị ruo afọ asaa n’oge ahụ a machibidoro anyị iwu iji sụgharịa ya. Mgbe afọ ole na ole gachara, e wepụtara akwụkwọ Insight na Watchtower Library nke dị na siidi n’asụsụ Indoneshian. Ndị sụgharịrị ha kpara ezigbo ike n’ihi na ọ dịghị mfe.
^ para. 2 E nwere narị asụsụ asaa na asaa ndị mmadụ na-asụ taa n’Indoneshia, nwee narị asụsụ asatọ na iri atọ na asatọ a na-asụ na Papua Niu Gini. Papua Niu Gini na Indoneshia gba. Ọ dịkwa n’ebe ọwụwa anyanwụ Indoneshia.
IKE A KPARALA NÁ NSỤGHARỊ
INDONESHIAN bụ asụsụ ọtụtụ ndị na-asụ
E nwere ihe dị ka asụsụ 707 a na-asụ n’Indoneshia
E nwere ndị nsụgharị 117. E KERE HA ỤZỌ 37
Ha na-asụgharị akwụkwọ anyị N’ASỤSỤ 24
Ha nọkwa EBE 19 arụ ọrụ ha
ASỤSỤ NDỊ OGBI:
Kemgbe afọ 2010, ụmụnna ole na ole na-asụgharị akwụkwọ anyị n’asụsụ ndị ogbi asụgharịala BROSHỌ asaa na TRAKTỊ asatọ
Alaka ụlọ ọrụ ahaziela KLAS ASỤSỤ NDỊ OGBI 24 e ji kụziere mmadụ karịrị 750 ASỤSỤ NDỊ OGBI
Ịgwa Ndị Mmadụ Aha Jehova n’Atụghị Egwu n’Indoneshia